🥇 ▷ Aaron Greenberg wuxuu ka hadlayaa Japan iyo heshiiska Phantasy Star Online 2 ✅
Aaron Greenberg wuxuu ka hadlayaa Japan iyo heshiiska Phantasy Star Online 2
Qofkasta, oo ay kujirto server, ku dhawaaqida Phantasy Star Online 2 waxay ahayd wax lala yaabo. Xaqiiqada ah in ciyaarta lagu sii deyn doono qalabka loo yaqaan ‘Xbox consoles’ ayaa ah guul u ah dadka Mareykanka, maantana Aaron Greenberg wuxuu iftiimin dheeraad ah ka bixinayaa sida gorgortankan oo dhan uu u socday ilaa ogeysiiskiisa ku xiga.
Wareysi dhowaan lala yeeshay warbaahinta mataanaha ah, maamulaha ayaa ka waramaya habka iyo farxadiisa isagoo heshiis la galay shirkadda SEGA. Kuwani waa ereyadiisii ​​ku saabsan soo laabashada Phil Spencer safarkiisii ​​ugu dambeeyay ee uu ku tegey Japan.
Wuxuu fadhiyey qolka fadhiga oo wuxuu macno ahaan u soo galay oo yidhi, “Hey, waxaan kulan la yaab leh la qaatay Sega, iyagu waa shuraako la yaab leh…”
Isla markiiba waan dhaqaaqay maxaa yeelay waxaan ciyaaray Phantasy Star Online markii aan asalka u ahaa Xbox iyo Dreamcast. Dhaxal badan ayaan ku leenahay taas.
Weli waxaa jira dhowr taageerayaal ah, waxaanan ku aragnay jawaab celinnada shabakadda dadka qaar, iyaga ahaan waxay u ahayd qaybta ay ugu jecel yihiin wax kasta oo E3 ah.
Phantasy Star Online 2 iyo meesha ay ku taal
Markii wax laga weydiiyay waxa ku cusub suurtagalnimada in ciyaarta la keeno dhowr meeloodGreenberg wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ogaado in ciyaarta ay gaari doonto dad badan.
Waxaan ognahay inay jiraan ciyaartoy kaladuwan oo kaladuwan iyo waxyaabo kaladuwan oo kaladuwan iyo fursado kaladuwan.
Keenista ‘Phantasy Star Online 2’ Xbox, oo xageeda ku jirta, waxaan u maleynayaa inay fiicnaan doonto. Waxaan ku farxi doonaa taageerayaasha franchise-ka ku barbaaray, sidoo kalena u soo bandhigi doona dadka cusub.
Marka la eego safarka Phil Spencer ee Japan, Aaron Greenberg wuxuu si faahfaahsan u sharraxay sida madaxa fikirka fikirka ee qeybta Xbox uu u dhaqmayo markii uu la kulmayo istuudiyaha Japan.
Aad ayey noogu fiican tahay. Waxay wax weyn u tahay Sega, iyo hambalyo ku aaddan Phil sida ay u dhiseen iskaashatadaas isla markaana waqti u siisay in ay ku aadaan Japan marar badan oo ay la kulmaan kooxahaas.
Waxa ugu fiican ayaa ah haddii aad u sii waddo socdaalka noocaas ah oo aad la socoto Phil, wuxuu la fariistaa kooxda horumarka, ciyaaraa, cadaawayaa…
Waa wax lagu farxo. Taasi waa waxa ka dhigaya warshadan wax badan oo xiiso leh. Waa jaceylka cayaaraha iyo sida cayaaruhu farxad ugu keenaan nolosha dadka. Qaar ka mid ah hal abuurayaasha adduunka ugu fiican ayaa ku sugan Jabaan, haddii aan gacan ka geysan karno abuuritaankooda iyo hal abuurnimadooda suuqa ballaaran, waxaan qabaa inay tahay wax wanaagsan.
Dabcan xaaladdu mar horeba waxay qaadatay talaabo weyn, laakiin shaqo dheeri ah ayaa wali loo baahan yahay si loo yareeyo khadkaas ciyaarta ee aan dhaafin Xbox.